Maxaa maanta ka jiray magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan? – Hornafrik Media Network
Maxaa maanta ka jiray magaalada Baladweyn ee gobolka Hiiraan?
By HornAfrik	 On Jun 24, 2018
Hornafrik-1400 oo dhameysatay Dugsiyada sare ee magaalada Beladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta u fadhiistay imtixaanka dowlada kadib markii dib loogu dhigay ardaydaasi imtixaanka dowlada oo la qaaday 19kii bishii May markaas oo magaalada Beladweyne ay la daalo dhaceysay fatahaad uu sameeyay Wabiga Shabeele ee mara magaalada.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukumadda Soomaaliya C/Raxmaan Daahir Cusmaan oo shalay gaarey magaalada Baladweyne ayaa maanta furaya Imtixaanka, kaas oo xalay kulmo gooni gooni ah la qaatay maamulka gobolka, odoyaasha dhaqanka iyo aqoonyahanada gobolkaas waxuuna kala hadlaya arimo kala duwan inkastoo markii dambe uu sheegay in dowlada dhexe ee Soomaaliya ay gacan ka geysan doonto Iskuuladii ku bur buray Fatahaadii uu sameeyay wabiga Shabeele.
19kii Bishii la soo dhaafay ee May ayaa Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya waxa ay qaaday imtixaanka mideysan ee dugsiyada Sare kaas oo si isku-mid ah looga qaaday Ardayda deegaanada maamulada Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo deegaanada kale ee Hir-Shabeelle marka laga reebo Baladweyne.
Golaha iskaashiga maamul goboleedyada oo taageeray in deeqaha aan la siinin Soomaaliland.
Madaxda Dowladda Soomaaliya oo Hambalyo u diray Madaxweynaha Dalka Turkiga Erdogan.